Indlu enevaranda yonke sinombuki zindwendwe onguDavid
ICarrickalinga Getaway kunye nePets Galore likhaya leeholide elithandekayo elikwimizuzu nje embalwa yokuhamba ukuya kulwandle oluhle lwaseCarrickalinga. Amagumbi okulala ama-4 kunye namagumbi okuhlambela ayi-2 ukuhlalisa ukuya kwiindwendwe ezisi-8.
Vula isicwangciso sokuhlala nekhitshi kunye negumbi lokutyela ngokujonga igadi entle yangaphambili. Indawo yokuphumla igcwele iTV enkulu yescreen esisicaba, idvd/vcr player kunye nebhedi esongwayo. Uya kufumana inkqubo yokwahlula umjikelo obuyela umva kwindawo yokuhlala ukufudumeza kunye nokupholisa indlu, kunye nabalandeli besilingi kwezo nyanga zishushu.
Ihonjiswe indawo entsha efihlakeleyo eyonwabisayo ephambi kwepropathi ngokujonga indawo yegadi evalwe ngokupheleleyo, indawo entle yokuphumla nokubukela abantwana bedlala ebaleni okanye bayonwabele i-bbq yosapho.
Igaraji iguqulwa ibe yindawo enkulu yemidlalo enokufikelela kwibar, intenetya yetafile, itafile yepool kunye neethoyi zaselwandle. Le ndlu ikwayindawo egqibeleleyo yokubalekela izilwanyana ebomini bakho, njengoko ivaleleke ngokupheleleyo ngaphambili nangasemva kwaye inocango lwenja yayo.
4.60 ·Izimvo eziyi-94
4.60 · Izimvo eziyi-94